Maxay DF uga aamustay aflagaadada loo gaystay Nebi Muxamed صلى الله عليه وسلم? - Caasimada Online
Home Warar Maxay DF uga aamustay aflagaadada loo gaystay Nebi Muxamed صلى الله عليه...
Maxay DF uga aamustay aflagaadada loo gaystay Nebi Muxamed صلى الله عليه وسلم?
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ah dalal Islaam oo dhowr ah oo aan weli cambaareyn aflagaadad ay gabar ka tirsan xisbiga maamulka India ee BJP u gaysatay Nebi Muxamed صلى الله عليه وسلم.
Dalalka Islaamka ee illaa hadda cambaareyey gefka India ayaa kala ah; Imaaraadka Carabta, Turkey, Oman, Indonesia, Iraq, Maldives, Jordan, Libya, Bahrain, Kuwait, Iran, Qatar iyo Sacuudi Carabiya, ayada oo liiska uu sii kordhayo.
Ma cadda haddii xukuumadda ra’iisul wasaare Rooble aysan weli ku baraarugsaneyn arrintan, iyo haddii ay go’aansatay inay isaga aamusto.
Afhayeenka BJP Nupur Sharma ayaa aflagaadeysay Nebiga NNKH iyo xaaskiisa Caa’isha ayada oo ka qeyb galeysay dood taleefishin, halka madaxa warbaahinta xisbiga BJP Naveen Kumar Jindal uu qoraal aflagaado ah soo geliyey twitter-ka. Xisbiga BJP ayaa shaqo joojin ku sameeyey labada xubnood.
Caasimada Online ma soo qori karto hadallada ay sheegtay gabadhaas, maadaama ay gef yihiin, islamarkaana bahaintooda ay ka dhigan tahay gefka oo lasii faafiyey.
Dalal Islaamka badankood ayaa u yeeray safiirada India u jooga dalalkaas, ayaga oo u dhiibay qoraallo cabasho oo rasmi ah, kana dalbaday raali-gelin.
Ururka Iskaashiga Islaamka (IOC), oo Soomaaliy ay xubin ka tahay, ayaa sheegay inuu sida ugu xooggan u cambaareynayo aflagaadada ay Nebiga NNKH u gaysteen xubnaha ka tirsan xisbiga BJP. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya weli lagama hayo qoraal u gaar ah.
Ka sokow dowladda Soomaaliya, shacabka Soomaaliya iyo culimada ayaa sidoo kale weli si aad ah ugu baraarugsaneyn arritan, ayada oo weli aysan xitaa culimada waa weyn ee dalka aysan ka hadal.
Shacabka dalalka Islaamka qaarkood ayaa billaabay olole ka socda baraha bulshada ayaga oo dalbanaya in la qaadaco dhammaan badeecadaha ay soo saarto India, balse Soomaalida weli si buuxda uma mid ahan arrintan.